Ihe ngosi Equipment International Manufacturing China Yiwu 2021
China Yiwu International Emepụta Equipment Expo 2021
Ụlọ Ọrụ Weebụ http://www.ywmeexpo.com/
Categories: Injinia oru, Akpaaka & Robotics, Ngwá ọrụ eji emepụta ya
2025 Zhejiang edinam mmemme "iji mejuputa" emere na China dị ka ohere, iji mepụta ma n'ụlọ ma na mba ofesi nwere mmetụta pụtara ìhè nke nrụpụta akụrụngwa, ngosi, nkwukọrịta, na imekọ ihe ọnụ maka iwebata akụrụngwa nke ụlọ na nke mba ofesi, teknụzụ na talent otu ọrụ, ọrụ maka akụrụngwa n'ichepụta ụlọ ọrụ amalite ahịa, na-ebu "nnọchi" igwe "nwere ọgụgụ isi n'ichepụta ọrụ, ọrụ maka mmepe nke elu-ọgwụgwụ akụrụngwa n'ichepụta ụlọ ọrụ.
Ihe ngosi a ga - enwe ụlọ ntu ọkọlọtọ mba ụwa abụọ, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ 2,000 na - emepụta ngwa ọrụ sitere n'ụlọ na mba ọzọ ga - egosipụta ebe a. A na-atụ anya na ngosi ahụ ga-adọta ndị ọkachamara na-azụ 200, gụnyere ihe karịrị ndị isi 40,000 na ndị nnọchi anya ịzụta nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe karịa ọkwa na mpaghara Zhejiang. Gbalịa ịkpọ karịa ụlọ ọrụ etiti iri na ise iji guzobe otu ndị na-azụ ihe, ihe karịrị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ a ma ama nke 10,000 iji hazie otu ndị na-azụ ahịa, yana ihe karịrị mmadụ 15 ndị otu na-azụ ahịa si mba ofesi isonye na ngosi ahụ. Gbalịsie ike maka ihe karịrị ijeri yuan iri na abụọ nke nkwekọrịta nkwekọrịta maka ego maka ngwa akụrụngwa, nke nkwekọrịta nkwekọrịta maka ịzụrụ akụrụngwa nke ndị na-emepụta mpaghara abụghị ihe na-erughị 60 ijeri yuan, na nkwekọrịta nkwekọrịta maka ire akụrụngwa nke ndị na-egosi mpaghara anaghị erughị 500 ijeri yuan. Anyị ẹkenam 12 akụrụngwa n'ichepụta oru ngo na a ngụkọta ego nke 6.7 ijeri yuan.
1. Ngosipụta akụ na ụba na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ọgụgụ isi
Gbado anya na igwe ojii kọwaa, nnukwu data, Intanet nke ihe, ọgụgụ isi na ihe ndị ọzọ rụpụtara ọhụrụ na ngwọta ụlọ ọrụ; Robot na mwekota sistemụ, mmepụta na usoro akụrụngwa akụrụngwa, ụlọ nkwakọba ihe ọgụgụ isi na akụrụngwa, nnyefe akụrụngwa yana akụrụngwa akụrụngwa metụtara ya na ngwa ya.
2. Nkwakọ ngwaahịa, mbipụta na plastik ụlọ ọrụ ngosi
Key ngosi akwụkwọ ahịhịa igwe, akwụkwọ cup igwe, akwụkwọ gbọmgbọm igwe, bronzing igwe, laminating igwe na ụdị ndị ọzọ nke akwụkwọ ngwaahịa nhazi na mma ígwè; All iche iche nke nkwakọ igwe, dị ka nri nkwakọ, ndochi, onyinye nkwakọ na post-nhazi nkwakọ; Ọgwụ na ịkpụzi igwe, granulator, igbu ịkpụzi igwe na ndị ọzọ plastic igwe na Ebu.
3. CNC igwe ngwaọrụ na metal nhazi ngosi
Key ngosi metal ọnwụ igwe ngwaọrụ, metal akpụ igwe ngwaọrụ, dị iche iche nhazi emmepe, laser ịgbado ọkụ ọnwụ ngwá, mgbanwe mmepụta akara, na ndị ọzọ na isi nwere ọgụgụ isi na ngwá; Usoro nchịkwa ọnụọgụ, ihe ngosi ihe ngosi dijitalụ, akụrụngwa igwe, abrasives, ihe ndozi akụrụngwa, ngwa igwe, wdg.
4. Knkpa akwa na ịkwa akwa na ihe ngosi teknụzụ
Ngosiputa ihe ngosi nke ngwa oru labrador, gunyere: igwe nkpuchi labrador, igwe nkpuchi akpaka, ihe nchacha ahihia, igwe ihe eji eme akwa, akwa ugwo akpaka, ihe ndi ozo na ndi ozo; Akụrụngwa akụrụngwa, gụnyere: igwe ejiji akwa, igwe ejiji akwa keyhole igweodu, eriri igweoduakwa, bead igweoduakwa, wdg Automatic ịkwa akwa unit, gụnyere akpaka akpa-oghere igwe, akpaka trouser kpachie igwe, akpaka lapel igwe, akpaka bag-arapara igwe, akpaka template igwe, wdg
Tags: Ọgụgụ isi Manufacturing, Factlọ ọrụ ọgụgụ isi
Sibafo Ọnwa 3 ọnwa iri na otu
ọ bụ ihe ngosi onye ọbịa. Je suis africain et je vis en Allemagne.
Enwere m ike ịdebanye aha ya na Afrique na ihuenyo ndị a ka anyị na -enyocha ya
Taiwan akpaaka ọgụgụ isi Na robot Gosi
Shanghai Intelligent Factory Ngosi (SIA)
Xiamen Intelligent Manufacturing Ngosi
China Ihe ngosi Electronics Fair West Show
Igwe Teknụzụ Laser & Intelligent Manufacturing Expo